Abahlinzeki bamahedisethi & Ifektri - Abenzi bamahedisethi baseChina
I-iPhone 11 Pro ine-IMD eyodwa engezansi enama-anti-shells amathathu
Isizukulwane seKei Shadow iP 11 Pro Max CD ephrintiwe
I-Kei Ying Generation Red Mi K30
I-Qi Shadow iPhone XS Max
Isizukulwane seKei Shadow iP 11 ...
Umculo omusha uthokozela ikhanda ...
I-iPhone 11 Pro ine-single ...
Ukuvuleleka, ukubandakanya wonke umuntu, ukuzethemba kanye nokungena ngaphakathi yizenzo zethu, amazwi nezenzo ziyizethembiso zethu, futhi umphumela uvivinyo lwamazinga ethu.
Umculo omusha uthokozela ihedsethi yempilo-R100
Ihedsethi esezingeni eliphakeme ayikwazi ukuvikela izindlebe zethu ngempumelelo kuphela, kepha okubaluleke kakhulu, ukuthi umsindo olethayo ungenza izindlebe zakho zikhulelwe ngemizuzu. Kulezi zinsuku, umculo usuphenduke enye yezindlela zamanje zokuncipha, futhi uyithuluzi lokuhlushwa.
Umculo omusha uthokozela ihedsethi yempilo-S9 XR
Amaphuzu okufanele aqashelwe ngamahedfoni ezemidlalo:
Naka indlela ihedsethi egqokwa ngayo, bese ukhetha ukwakheka okungenzeka ukuthi kungawi
Ukunyakaziswa komzimba ngesikhathi sokugijima kungenza kalula ukuthi ama-earphone awe. Ngakho-ke, induduzo nokuqina kubaluleke kakhulu lapho uzigqoka. Kuyimi
Umculo omusha ujabulela i-headset ye-life-C500 plus
Yintsha yanamuhla, yini ihedsethi? Iphonephone iyizingxenye zokuguqulwa. Iyamukela isignali kagesi ethunyelwa isidlali semidiya noma isamukeli, bese siyiguqula ibe ngamagagasi omsindo ozwakalayo kusetshenziswa isipikha esiseduze nendlebe. Amahedsethi ngokuvamile atholakala kusidlali semidiya naku-conn
Imodeli eyi-headset tuningC600
imodeli yamahedisethi we-stereoC3
Umculo omusha uthokozela ihedsethi yempilo-C4
Yintsha yanamuhla, yini ihedsethi? Iphonephone iyizingxenye zokuguqulwa. Iyamukela isignali kagesi ethunyelwa isidlali semidiya noma isamukeli, bese siyiguqula ibe ngamagagasi omsindo ozwakalayo kusetshenziswa isipikha esiseduze nendlebe. Amahedsethi ngokuvamile atholakala kusidlali semidiya futhi axhunywe nge-plug. Inzuzo ukuthi ungalalela umsindo uwedwa ngaphandle kokuthinta abanye; noma umsindo wendawo ezungezile. Okwezitudiyo zokuqopha, imigoqo, ezokuvakasha, ezemidlalo, njll.
Umculo omusha uthokozela ihedsethi yempilo-E500
Ukuzijabulisa kwansuku zonke: Empilweni yansuku zonke, ongenakho ukuzijabulisa okuncane okwakhe, ukudlala imidlalo ye-TV nokudlala imidlalo kungumsebenzi wokuzijabulisa wansuku zonke. Uma ufuna umuzwa ongcono wokuzijabulisa, gxila ezweni lakho. Bese ukhetha ama-headphone anokuvikela kangcono umsindo. Ama-headphone ngokuvamile anezindlebe ezikahle ezigoqa izindlebe, ezingahlukanisa ngokuqinile umsindo wangaphandle, zilethe isipiliyoni sokugqoka kahle ngaphansi kwesisekelo sokunciphisa umsindo, futhi zilethe ukunakwa ekusetshenzisweni.
Umculo omusha uthokozela ihedsethi yempilo-E300
Izicelo ezithile ezibandakanyeka kumahedisethi angenazintambo ezimboni zifaka phakathi lezi zinto ezilandelayo: ukwakhiwa kwesiza njengemishini yokuphakamisa phezulu, abasebenzi bezindiza, izimboni zendali, ukuvikela umlilo, ukuhlola uphethiloli nezimayini, nokusebenza kwemishini emikhulu yezimboni, ukuqeqeshwa nezinye izikhathi. Lezi zikhathi ngokuvamile zinezici ezilandelayo: kungahle kube nezinga elithile lobungozi, noma amaphutha wokusebenza azoletha imiphumela engalindelekile, imininingwane iyamangaza ...
Umculo omusha uthokozela ihedsethi yempilo-E600
Amahedifoni ayithuluzi lokuguqula i-electro-acoustic eliguqula amasiginali kagesi womsindo abe umsindo. Kunezinhlelo zeziteshi ezimbili neziteshi eziningi kubuciko bangaphambilini, yize zinokusatshalaliswa komsindo nesithombe okusobala. Kepha zisatshalaliswa kulayini noma endizeni, uhlelo oluphelele lwe-stereo kufanele lube yisistimu yomsindo ozungezile equkethe isikhala esinobukhulu obuthathu. Isitiriyo esinamacala amathathu siyadluliselwa futhi senziwe kabusha ngohlelo lweziteshi ezine. Ngalesi sikhathi, izikhulumi ezine kufanele b ...
Umculo omusha uthokozela ihedsethi yempilo-R200
Yini ihedsethi yokuthembeka okuphezulu? Ukusebenza okuyinhloko kwehedsethi yokuthembeka okuphezulu okunconyiwe embhalweni we-International Electrotechnical Commission IEC581-10 ngukuthi: ibanga lemvamisa alikho ngaphansi kuka-50Hz-12500Hz, futhi impendulo enhle kakhulu yemvamisa yehedsethi yamanje enamandla cishe ingu-5-45,000Hz; iphutha elivumelekile lempendulo ejwayelekile yemvamisa li-3dB elihle futhi elibi; Umthambeka wejika lokuphendula imvamisa awudluli i-9dB nge-octave ngayinye; ngaphakathi kwe-250Hz-800Hz, umehluko ube ...
Umculo omusha uthokozela ihedsethi yempilo-R400
Ngemuva kokuthi ihedsethi isesandleni, kufanele siqale sidumise ihedsethi. Ngalesi sizathu, ngikholwa ukuthi wonke umuntu uzokwazi uma ngingakusho. Singakujabulela ngemuva kokufakwa kwesicelo, kepha ngabe konke akuhambi kahle inqobo nje uma kushayelwa ihlombe? Impendulo ithi cha, ikhwalithi yamanye ama-earphone muhle kakhulu, ngoba imvamisa sisebenzisa ama-earphone ethu esiwathandayo bese sifa ngaphambi kwesikhathi ngoba asinakile ekuyisebenziseni! Nazi ezinye zezimo ezijwayelekile ngenkathi kulungiswa amahedfoni, futhi ngizokunikeza ...
Umculo omusha uthokozela ihedsethi yempilo-R600
1121 Yongjun Road, Yiwu Idolobha, Jinhua Idolobha, Isifundazwe Zhejiang